काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संयुक्त अरब इमिरेट्सलाई नेपालमा लगानी गर्न उपयुक्त वातावरण भएको बताएका छन् ।
आज अर्थ मन्त्रालयमा संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत साईद हमदास अलनाकवी बीचको शिष्टाचार भेटवार्तामा अर्थ मन्त्री डा. खतिवडाले नेपालमा लगानीको उचित अवसर भएको बताएका छन् ।
भेटका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले अरबसँग भएको स्रोत नेपालमा लगानीको लागि अवसर सम्भव भएकाले समयमै पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपालको सिंचाई, ऊर्जा, भौतिक संरचना विकास, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी लगानीको उपयुक्त वातावरण भएको बताए ।
नेपालका अर्थमन्त्रीलाई संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणको लागि त्यहाँका अर्थमन्त्रीको निमन्त्रणा रहेको बताउनुहुदै राजदूत अलनाकवीले नेपालको हवाई सेवा तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न दोहोरो कर मुक्ती सम्झौता गर्न आवश्यक भएको बताए । उनको जिज्ञासा प्रति मन्त्री खतिवडाले नेपाल त्यसका लागि छलफल गर्न खुल्ला भएको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन तयार भएको स्पष्ट पारे ।
भारतीय पुर्वअर्थमन्त्री चिदम्बरमलाई जमानतमा छोड्न आदेश
नयाँ दिल्ली । भारतीय पुर्वअर्थमन्त्री पी चिदम्बरमलाई सर्वोच्च अदालतले जमानतमा छोड्न आदेश दिएको छ । आइएनएक्स मिडियाको अनिमियता प्रकरणमा १०७ दिन हिरासतमा बसेका चिदम्बरमलाई अदालतले जमानत दिएको हो । ७४ बर्षिय
एडिबीको दशौँ अध्यक्षमा जापानी अर्थमन्त्री मासातुस्गु
काठमाडौँ । एशियाली विकास बैंकको सञ्चालक समितिको आजको बैठकले जापानी प्रधानमन्त्रीका विशेष सल्लाहकार तथा अर्थमन्त्री मासातुस्गु आस्कावालाई बैंकको दशौँ अध्यक्षका रुपमा चयन गरेको छ। बैठकले उनलाई सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको हो।
शहरी पूर्वाधारमा लागनी गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले कानूनले नै वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गरेको भन्दै निर्धक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरेका छन्। नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास र चिनियाँ लगानीकर्ताले संयुक्तरूपमा आज आयोजना गरेको